डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या २२ लाख पुग्यो , के हो डिम्याट खाता, काहा र कसरी खोल्ने? – Enepali Samchar
December 3, 2020 adminLeaveaComment on डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या २२ लाख पुग्यो , के हो डिम्याट खाता, काहा र कसरी खोल्ने?
सेयर बजारले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाइरहँदा डिम्याट खाता खोल्नेहरु बढेका छन्। सिडिएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार यस्तो खाता खोल्नेको संख्या करिब २२ लाख पुगेको छ।अहिलेसम्म २१ लाख ९९ हजार ६७ जनाले डिम्याट खाता खोलेको क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। यद्यपि कतिपयले दुई खाता खोलेको पनि हुन सक्ने उनले बताए।
यस्तो खाता दुईभन्दा बढी खोल्न भने पाइने छैन। दुईभन्दा बढी खाता खोलेमा रद्द हुने प्रावधान रहेको न्यौपानेले बताए।
असार मसान्तसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या १६ लाख ८६ हजार १०२ थियो। साढे ४ महिनामै ५ लाख १२ हजार बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन्। यसले सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको संख्या बढेको पुष्टि गर्ने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। सेयर बजारबारे जति बढी प्रचार, प्रसार हुन्छ त्यति नै बढी डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकअघि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता : के भयो त छलफल
हरेक दिन सासुलाइ बिष खुवाउने यी बुहारी…..पुरा हेर्नुहोस्